Milkiilaha Man United ee Avram Glazer oo ka dhawaajiyay war aad uga farxiyay taageerayaasha kooxda – Gool FM
(Manchester) 23 Maajo 2022. Milkiilaha Manchester United ee Avram Glazer ayaa ka hadlay qorshaha qandaraasyada kooxda ee suuqa xagaaga, si ay uga gudubto niyad-jabka xilli ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
Man United waxa ay soo martay xilli ciyaareed masiibo ah oo heer walba ah, kooxdana kuma aysan guuleysan wax koob ah tartamadii ay ciyaartay, sidoo kale waxa ay lumisay fursad ay ku ciyaarto Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Shabakada Sportskeeda ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Milkiilaha Manchester United ee Avram Glazer, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxay u ahayd xilli niyad-jab ah qof walba, waxaanan qaban doonnaa shaqo adag si aan xilli ciyaareedka soo socda uga dhigno mid ka sii wanaagsan.”
“Miyaan ku kalsoonahay awoodaha Erik ten Hag? .. Haa, waana sababta aan ula saxiixnay, waxaan aaminsanahay inuu qaban doono shaqo weyn.”
“Waxaan mar walba bixin jirnay lacagta lagama maarmaanka ah si aan ula soo saxiixano ciyaartoy cusub.”
Taageerayaasha Manchester United ayaa rajeynaya in Erik ten Hag uu ku guuleysan doono inuu kooxda ku soo celiyo fagaarayaasha guulaha laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda, gaar ahaan maadaama tababaraha Holland uu durba guulo waaweyn ka gaaray kubadda cagta kooxdiisii ​​hore ee Ajax Amsterdam, iyada oo loo caleemo saaray horyaalka Holland dhowr maalmood kahor.